Chelsea Oo Toddobaadka Dambe Shaacinaysa Kai Havertz, Barca Oo Man City Ku Duushay, Klopp Oo Sugaya Ismaila Sarr & Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa - Gool24.Net
Chelsea Oo Toddobaadka Dambe Shaacinaysa Kai Havertz, Barca Oo Man City Ku Duushay, Klopp Oo Sugaya Ismaila Sarr & Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa
August 8, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Chelsea waxay doonaysaa inay iibiso ciyaartoygeeda qaar ka mid ah si ay u hesho £65 milyan oo Gini oo ay West Ham United kaga soo gadato laacibka khadka dhexe ee Declan Rice oo ah 21 jir u dhashay England. (Star)
Frank Lampard waxa uu caddeeyey in kooxdiisu ay isku dayday inay wax walba samayso si ay usii haysato Willian oo la filayo inuu Arsenal ugu wareegayo heshiis xor ah. (Mirror)
Barcelona waxay dalab £14 milyan oo Gini ah ka gudbin doontaa difaaca 19 jirka ah ee Manchester City ee Eric Garcia oo u dhashay Spain, isla markaana u sheegay kooxdiisa in aanu heshiis cusub u saxeexayn. (Goal)
Madaxweynaha Juventus, Andrea Agnelli ayaa beeniyey wararka sheegaya in weeraryahanka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo oo 35 jir ah uu ka tegayo kooxda, kaddib markii ay Juve ka hadhay Champions League oo ay Lyon ku garaacday wareeggii 16ka. (Sky Sports Italia)
Xiddiga khadka dhexe uga ciyaara Bayer Leverkusen iyo qaranka Germany ee Kai Havertz oo 21 jir ah, ayaa Chelsea iman karaya bilowga toddobaadka dambe, iyadoo ay Blues u hurayso £71 milyan oo Gini. (Star)
AC Milan waxay xiisaynaysaa kubbad-sameeyaha Arsenal ee reer Uruguay, Lucas Torreira oo 24 jir ah, kaas oo kursiga kaydka uu geliyey Mikel Arteta. (Telegraph)
Laacibka garabka weerarka uga ciyaara Watford iyo xulka Senegal ee Ismaila Sarr oo 22 jir ah, waxa uu kusoo baxay liiska gaaban ee ciyaartoyda ay Liverpool doonayso xagaagan inay lasoo wareegto. (Liverpool Echo)
Ajax ayaa xiise u muujinaysa garabka weerarka Tottenham ee Ryan Sessegnon oo 20 jir ah, waxaanay ku doonayaan qaab amaah ah. (Telegraph)
Kooxda Faransiiska ah ee Rennes waxay wada-hadallo la bilowday difaaca Chelsea ee Fikayo Tomori oo ah 22 jir u dhashay England. (L’Equipe)
Wolves ayaa wada-hadallo la furaysa tababaraheeda Nuno Espirito Santo marka uu soo dhamaado tartanka Europa League, waxaanay doonaysaa inuu saxeexo heshiis cusub oo uu kusii layliyo kooxda. (Mail)
Manchester United waxay shaqaalaheeda suuqu la socdaan goolhayaha Napoli ee Alex Meret oo ah 23 jir u dhashay Talyaaniga. (Star)
Everton waxay doonaysaa inay soo qaadato xiddiga khadka dhexe uga ciyaara Atletico Madrid ee Thomas Lemar. 24 jirkan ayaa dul-saar ku noqday kooxda reer Spain, kana waayay boos joogto ah. (Le10Sport)
Tottenham waxay wada-hadallo qoto dheer kula jirtaa Inter Milan oo ay ka doonayso difaaca reer Slovakia ee Milan Skriniar oo ah 25 jir bartilmaameed u ah Liverpool iyo Manchester United. (Tuttosport)
Leeds United waxay ka fiirsnaaysaa inay £15 milyan oo Gini ku dalbato weeraryahanka 23 jirka ah ee Liverpool iyo xulka Wales ee Harry Wilson. (Sun)
Crystal Palace waxay kula dagaallami doontaa Fulham saxeexa kubbad-sameeyaha Southampton ee Harrison Reed. 25 jirkan ayaa xili ciyaareedkii hore amaah ku qaatay Craven Cottage. (Football Insider)
Agaasimaha ciyaaraha kooxda Werder Bremen ee Frank Baumann waxa uu sheegay in naadigiisi uu danaynayo inuu Manchester United heshiis amaah ah kaga soo qaato 20 jirka garabka weerarka ka ciyaara ee Tahith Chong. (Manchester Evening News)
Arsenal, Juventus iyo Man City waxay dhamaantood doonayaan 22 jirka Lyon dhexda uga ciyaara ee Houssem Aouar. (L’Equipe).